Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » I-EU inyanzelisa abahambi baseMelika
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukwaphula iindaba zase-US • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
kwiiveki 3 ezidlulileyo
I-European Union ibuyisele izithintelo zokuhamba kubantu baseMelika
I-European Union isusa i-United States kuluhlu olukhuselekileyo lokuhamba ngenxa yesipikha kumatyala amatsha e-COVID-19.
I-EU iyekise konke ukuhamba okungabalulekanga kubakhenkethi baseMelika.
I-EU ibuyisele izithintelo zokuhamba ngenxa ye-US COVID-19 surge.
Abakhenkethi be-EU basahleli benqatshelwe ukungena e-US.
Amagosa e-EU acebise ukumisa konke ukuhamba okungabalulekanga e-United States njengoko iinombolo zamatyala ze-COVID-19 zase-US zitsaliwe.
Umongameli weKhomishini yaseYurophu u-Ursula von der Leyen
The udibano lwaseyurophu icebise amazwe angamalungu ayo ukuba asuse i-United States, Israel, Lebanon, Montenegro kunye ne-North Macedonia kuluhlu lwamazwe akhuselekileyo kuhambo olungabalulekanga, ngenxa yenani elonyukayo losulelo olutsha lwe-coronavirus kula mazwe.
Isibhengezo sanamhlanje seBhunga laseYurophu sifana nengcebiso yamazwe angama-27 angamalungu ebhloko, agcina ulawulo lwayo kwimida yawo. Ibuyisela umva ingcebiso kaJuni yokunciphisa izithintelo kubahambi baseMelika.
Ingcebiso ayibopheleli, okuthetha ukuba ilizwe ngalinye liya kuvunyelwa ukuba lithathe isigqibo sokuba basafuna ukuvumela abatyeleli base-US ngobungqina bokugonywa, uvavanyo olubi, okanye ukuvalelwa wedwa.
I-EC ihlaziya iingcebiso zayo zokuhamba rhoqo kwiiveki ezimbini, ngokusekwe kumanqanaba osulelo e-COVID-19. Iya kuthathelwa ingqalelo “Ukhuselekile” ilizwe kufuneka lingabikho ngaphezulu kwe-75 yamatyala amatsha kubemi be-100,000 kwisithuba seentsuku ezili-14.
Ngokwedatha yamva nje, i-US i-avareji ye-152,000 yamatyala amatsha e-COVID-19 ngosuku kwiveki ephelileyo, ngokuhambelana namanani ukusuka ngasekupheleni kukaJanuwari.
Ukugquma kwakutshanje kuyazicinezela izibhedlele kunye nabasebenzi bokhathalelo lwempilo. Phantse iiyunithi ezintlanu zononophelo lwabanyangi zifikelele kwi-95% yamandla.
Amanqanaba okusweleka nawo akhuphukile-efikelela kwi-avareji engaphezulu kwe-1,000 19 ngosuku. Ngaphezulu nje kwesiqingatha sabo bonke abantu baseMelika abagonyelwe ngokupheleleyo i-COVID-29. Abantu abangagonywanga banamathuba angama-19 okuba bangeniswe esibhedlele nge-COVID-XNUMX kunabo bagonywe ngokupheleleyo.
Ngelo xesha, khenketho isuka e EU -Kwaye uninzi lwehlabathi liphela-lihleli livaliwe ukungena e-US phantsi kwemiqobo ebekiweyo kwangexesha lobhubhane.
Kwasekuqaleni kuka-Agasti, abaphathi beBiden babenamahemuhemu okuba baqwalasele imfuneko yokugonya ukuvula imida kwakhona, kodwa akukho nto iye yavakala malunga nesindululo ukusukela oko.
Kwangoko kulenyanga, uMongameli weKhomishini yaseYurophu u-Ursula von der Leyen wathi ukungabikho kwembuyekezo akusayi kuvunyelwa ukuba "kurhuqele iiveki".
I-Thailand ivula kwakhona i-Phuket kubakhenkethi bamazwe angaphandle abagonyelweyo ...
I-Airbus iphehlelela iprojekthi yokuxhobisa i-fuselage eyi-A320 kwi ...
I-Koh Samui yase-Thailand ivula kwakhona ukuze kugonywe ...
Ngaba ubummi ngotyalo-mali buhamba kakubi?
Ilifa leMveli eliTyebileyo laseMaldives likhwaza ...
IGulf Air iqala ngenqwelomoya ukusuka eBahrain ukuya eMoscow ...
Iindawo zokutyela eDelhi, iihotele kunye nee-pubs bafumana ikhefu lerhafu
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica ubhekisa kuLawulo lwe-COVID-19 ...
I-Bahamas yoMphathiswa Wezokhenketho kunye nezoPhapho ibuyela kwi ...
I-Qatar Airways iphindwe kabini ngenqwelomoya eLagos
ILufthansa iqala kwakhona kwi-premium yayo eMntla Melika naseAsia ...
Ukhenketho lweBarbados lubuyela ngokurekhodwa ngoJulayi
I-Alaska Airlines iphehlelela isivumelwano sodibaniso ...
Thina Bantu sibhiyozela uJulayi 4, 2021
USkål uhlawula uWalter Kenneth “Ken” ...